Hitady ahy! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2019 16:07 GMT
Tsy zavatra iray notadiaviko ny Global Voices tamin'ny fotoana nahatongavany teo amiko.= Somary hafahafa ihany ny nifankahafantarako tamin'ny GV. Fialantsasatra lohataona 2014 tamin'izay raha natolotra ho fanomezana ho ahy ilay boky “Malala Aho” izay nahaliana sy nitondra aingampanahy ary nahatonga ahy hitety ny tranonkala Malala Fund. Rehefa nitety ilay tranonkala aho dia nahita fa ny tranonkala Malala Fund dia tohanan'ny fikambanana iray antsoina hoe ; “Afaho ny Ankizy” ary taorian'ny nitsidihana ny tranonkalan-dry zareo dia hitako ny momba ny bilaogin-dry zareo manokana. Ary ny fifanandrifian-javatra dia ity, Global Voices no anarany! Efa alina be ny andro ary tsy notehiriziko ny momba ilay tranonkalan-dry zareo. Ny ampitso maraina, noho izaho talanjona tamin'ny asan-dry zareo dia niriako ny hiverina tao amin'ilay tranonkala sy handefa imailaka amin'izy ireo. Ary tena nanamarika ahy tokoa ny tsy nitahirizako ny momba ilay tranonkalany tao anatin'ny lisitr'ireo ankafiziko, ka dia nokarohako tao amin'ny Google ny hoe : “Global Voices”
Nitondra nankany amin'ny globalvoices.org ny valim-pikarohana ary dia nandeha nitsidika ilay tranonkala aho. Dia izay, tafiditra tao anatin'ny fahatsaran'ny GV aho. Tsaroako fa tery amin'ny tendrony havia nisy fomba fisoratana anarana ho mpanoratra ao amin'ny GV. Ary amin'ny maha-mpankafy ny fanoratana dia nameno ilay fomba fisoratana aho no sady nanindry ny “Ampiharo!”. Avy eo aho mbola niverina nikaroka ny Global Voices an'ny Free The Childrens.
Nandeha ny andro ary adinoko aza ny hoe nisoratra ho mpanoratra ao amin'ny GV aho, rehefa naharay imailaka avy amin'i Rezwan Islam aho, ilay toniandahatsoratry ny GV Asia Atsimo, hoe hitany ny fisoratako anarana ary naniry izy ny mba hijereko ireo Fepetra sy Fitsipiky ny GV ary hanoratra ny lahatsoratro voalohany indrindra, izay hitondrany ny fanampiany ahy!
Nientanentana be tokoa aho fony nanoratra ny lahatsoratro voalohany ary hendratrendratra be satria tena zavatra samihafa amin'izay efa nataoko hatreto ilay izy. Zatra nanoratra tantara feno fomba fijery manokan'ny tena aho ary manolotra azy ireny ho an'ireo tranonkalam-bilaogy ao an-toerana ihany. Somary mafimafy ihany satria tsy mba nikaroka ny momba izany mihitsy aho ho an'izay zavatra nosoratako. Mbola tsaroako ilay izaho toy ny mpanao hatsikana rehefa nanao ny lahatsoratro voalohany! Nefa mbola teo ambany fitarihan'i Rezwan sy Sahar. Ny lahatsoratro voalohany dia momba ny Fanabeazana ireo ankizivavy ao Balochistan Pakistana (teny anglisy). Nozaraiko tao amin'ny media sosialy ilay lahatsoratra ary tsaroako ny fianakaviako manontolo nankasitraka izay voasoratro! Izaho irery tao an-trano no nanomboka nanoratra, teo amin'ny faha-15 taonako. Tena fotoan-dehibe tokoa ho ahy izay ary vao mainka goavana kokoa rehefa hita naverina navoaka tany amin'ny toerana vitsivitsy hafa.
Nadikan'i Anne Hemeda ho amin'ny teny Alemàna ilay lahatsoratro; izay tena tiako satria nanome lanja ahy ny GV! Tena zavadehibe tokoa rehefa injay nifandray tamiko tamin'ny maha-mpanoratry ny GV ahy ny olona ! Tena tsy mampino tokoa ny mifandray amin'ny vondrom-piarahamonina GV, indrindra fa i Annie Zaman sy Sana Saleem izay lasa tena tohana lehibe tokoa sy namana mahafinaritra!
Mbola tena zazavao aho ato amin'ny GV saingy toy ny hoe efa an-taona marobe aho no tato anatin'ity fianakaviana ity! Tena mahatsiaro mahazo aina aho manao zavatra kidaladala eto anatiny satria fantatro fa hisy hatrany olona iray hitari-dàlana ahy. Tsy matihanina aho saingy fantatro fa ny GV dia ho antony iray goavana amin'ny fahombiazako amin'ny hoavy, satria nianatra zavatra betsaka avy amin'ny tsirairay teto aho! Tsy ho ampy ny fisaorako ny rehetra! Tena manana lanja be amiko ny GV satria ny GV koa no nahafantarako ny tenako !
Tiako daholo ianareo !! Indrindra fa ny TARIKA GV PAKISTANA misy ahy!!